And i hung up the ph - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: and i hung up the phone , (Inglés - Birmano)
We just spoke to Garry on the phone.
ကျွန်တော်တို့ ဂယ်ရီနဲ့ ဖုန်းပြောပြီးပါပြီ။
ငါသည်လည်းမြေကြီးနှင့်ခွာ၍ မြှောက်ထားခြင်းကို ခံရလျှင်။ လူအပေါင်းတို့ကို ငါ့ထံသို့ ငါဆွဲမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ငါသည်မြင်၍ ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို သက်သေခံသည်ဟု ယောဟန်ဆိုလေ၏။
သို့ဖြစ်၍၊ ငါသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အစွမ်းသတ္တိနှင့် မြော်လင်စရာအကြောင်း ပျက်လေပြီဟု ဆိုရ၏။
ပင်လယ်ကိုလည်း ရေကုန်စေ။ သင်၏ မြစ် အပေါင်းကို ငါခန်းခြောက်စေမည်ဟူ၍၎င်း၊
အကျွန်ုပ်ကလည်း၊ မိန်းမသည်မလိုက်လိုလျှင် အဘယ်သို့နည်းဟု သခင်ကိုမေးလေသော်၊
ထိုသူအချို့တို့ကို ငါရွေးယူ၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အရာနှင့် လေဝိလူအရာ၌ခန့်ထားမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
“I love photography,” he continues over the phone, “Every artist has ideas in his head.
ဓာတ်ပုံထဲမှ ကလေးငယ်ဟာ ၄င်း၏ တူအရင်း အဖြစ်သည်။
而是更加复杂了 (Chino (Simplificado)>Español)płyn mózgowo rdzeniowy (Polaco>Alemán)dekorierte fliesen (Alemán>Español)goldschmidt (Inglés>Polaco)kuchapisha (Suajili>Italiano)pinaguusapan (Tagalo>Inglés)organizer (Inglés>Francés)active scripting (Inglés>Japonés)kmitočtovým (Checo>Inglés)zerkleinerte (Alemán>Neerlandés)salluste (Inglés>Vietnamita)attento veniamoascovarti ad alkida (Italiano>Albanés)outbound (Inglés>Malayo)mudichu (Tamil>Inglés)narrantes (Latín>Portugués)connectora, black , power supply (Inglés>Birmano)如果一入超 (Chino (Simplificado)>Coreano)le lis (Francés>Portugués)attila (Francés>Búlgaro)pro libertate patria (Latín>Inglés)studenterrådgivning (Danés>Alemán)qu'il ne suffit pas (Francés>Italiano)necatum esse (Latín>Italiano)clc (Inglés>Árabe)suggest me any one of yours fav song (Inglés>Hindi)